Rounter setting ​ထဲ ​မ​ဝင်​တတ်​လို့​ပါ. ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
robin.9909@gmail.comး​ကျ​တော်router Tp link model TL-WR941ND ​အ​မျိုး​အ​စား ​သုံး​ထား​ပါ​တယ်။ ​ကျ​တော်​က​အ​ပြင်​ကို ​ပြန်​ပြီး​လွှင့်​ပါ​တယ်။ ​ကျ​တော်​မ​သိ​တဲip ​တွေ ​ဝင်​လာ​ပါ​တယ် ​ကျ​တော်​က​တော့ ​ပိတ်​ထား​ချင်​ပါ​တယ်။ mac address ​ကိုrouter ​ထဲ​မှာ​ထည်​ပြီး ​ပိတ်​ထား​လဲ ​မ​ရ​ပါ​ဘူး။ ​ဘယ်​လို​ပိတ်​ရင်​ရ​ပါ​လဲ။ ​ဆော​ဝဲ​လေး​ရှိ​ရင်​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး။ router ​ထဲ​မှာ ​ဘယ်​လို​ပိတ်​ရ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို​လဲ ​ပြော​ပေး​ပါ​နော်
​ကျွန်​တော် wifi ​ဖောက်​နည်း​နဲ့ ​ပတ်​သက်​ပြီး ​ပို့စ်​မ​တင်​တာ ​အဲ့​ဒါ​တွေ ​ပါ​ပါ​တယ်. ​ခု​အ​ချိန်​အ​ထိ​လည်း​ပဲ ​သူ​များ ​လွှင့်​ထား​တဲ့ wifi password ​ခံ​ထား​ရင် ​ဘယ်​တုန်း​က​မှ ​မ​ဖောက်​ခဲ့​ဖူး​ပါ​ဘူး. wifi ​ကို​ဖောက်​ဖို့ ​စမ်း​တုန်း​က​တောင်​မှ ​ကို့​သူ​ဌေး ​လွှင့်​ထား​တဲ့ wifi ​ကို​ပဲ laptop ​အ​သစ်​နဲ့ ​ဖောက်​ခဲ့​ဖူး​တာ​ပါ. ​ဒါ​ဟာ​လည်း ​ကျွန်​တော်​တို့​ကို ​ပေး​ထား​ပြီး​သား password ​ပါ​ပဲ. ​ရ​မ​ရ ​အောင်​မြင်/​မ​အောင်​မြင် ​သိ​ချင်​ယုံ​စမ်း​တာ​ပါ. ​ကျွန်​တော်​အင်​တာ​နက်​ကို ​ခု​အ​ချိန်​အ​ထိ ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​ပြီး ​ဆိုင်​မှာ ​သုံး​ချင်​ရင် ​သုံး​မယ် ​မ​ဟုတ်​ရင်​တော့ ​ကိုယ်​ပိုင်​ဖုန်း​လိုင်း​နဲ့ ​သုံး​ပါ​တယ်. ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ​ဆို​ရင် ​သူ​တို့​တွေ​က ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​ပြီး ​လိုင်း​ဝယ်​ထား​တယ် ​ကို​က ​လက်​အ​ငြိမ်​မ​နေ​ပဲ download ​ဆွဲ​မယ့်​သူ​လေ. ​အဲ့​တော့ ​သူ​တို့​ဖက်​မှာ ​လိုင်း​တွေ ​ကျ​သွား​တာ​ပေါ့. ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​သူ​များ​လွှင့်​တဲ့​လိုင်း​ကို ​မ​သုံး​ဖြစ်​တာ​ပါ. ​တစ်​ချို့​တွေ​က ​နား​မ​လည်​ဘဲ​နဲ့ ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ ​သုံး​စေ​ချင်​လို့ wifi ​ကို ​ဖွင့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. setting ​ထဲ​ကို​ဘယ်​လို ​ဝင်​ရ​မယ် ​ဘယ်​လို​ပြင်​ရ​မယ်​ဆို​တာ​ကို ​နား​မ​လည်​ကြ​ပါ​ဘူး. ​အဲ့​လို ​နား​မ​လည်​တဲ့​သူ​တွေ​ကို ​နား​လည်​တဲ့​သူ​တစ်​ချို့​က ​သူ့​ရဲ့​လိုင်း​ထဲ​ကို​ဝင် ​ပြီး​တော့ ​သူ့​ရဲ့ Default IP ​ကို ​ပြောင်း​တယ်. Default username ​နဲ့ Default password ​ကို​ပါ ​ပြောင်း​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ဟို​က ​နား​မ​လည်​တော့ ​ဘာ​မှ ​မ​လုပ်​တတ်​တော့​ဘူး​ပေါ့. ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် ​ပို့စ်​သီး​သန့်​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ယ​ခု​လက်​ရှိ ​ကျွန်​တော် ​သုံး​နေ​တာ​က Hongdian ​အ​မျိုး​အ​စား 3G rounter ​ကို ​သုံး​နေ​ပါ​တယ်. ​ညီ​လေး​ရေ ​အောက်​က ​နည်း​အ​တိုင်း ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ.
​ညီ​လေး​ရဲ့ TL-WR941ND ​အ​မျိုး​အ​စား​ရဲ့ IP, Username, Password ​ကို​အောက်​မှာ ​ပေး​ထား​ပါ​တယ်.
TL-WR941ND Default IP:
TL-WR941ND Default Password:
TL-WR941ND Default Username:
​ဘယ်​လို​သုံး​ရ​မှာ​လဲ​ဆို​ရင်​တော့ ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး IE(internet explorer) ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် firefox ​စ​တဲ့ browser ​တစ်​ခု​ခု ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ. ​ညီ​လေး firefox browser ​ရှိ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​ယူ​ဆ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​တော့ ​အဲ့​ဒီ့ browser ​မှာ 192.168.1.1 ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ရိုက်​ထည့်​လိုက်​ပါ. Username ​နဲ့ password ​တောင်း​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အ​ပေါ်​မှာ​ပေး​ထား​သ​လို ​စာ​လုံး​အ​သေး​နဲ့​ပဲ username = admin, password = admin ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ရိုက်​ထည့်​လိုက်​ပါ. ​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် ​ညီ​လေး​ရဲ့ rounter setting ​ထဲ​ကို ​ရောက်​သွား​ပါ​ပြီ. ​ညီ​လေး​အ​နေ​နဲ့ ​အဲ့​ဒီ့​အ​ထဲ​မှာ ​ဝင်​ပြီး​တော့ ​ပြင်​ကြည့်​လိုက်​ပါ. ​အဲ​တ​ကယ်​လို့ 192.168.1.1 ​နဲ့​လုံး​ဝ ​ဝင်​မ​ရ​တော့​ဘူး ​ဆို​ရင်​တော့ ​တစ်​ယောက်​ယောက်​က ​အ​ပေါ်​က​ပြော​ထား​သ​လို​မျိုး ​ဝင်​ပြင်​ပြီး ​ပြောင်း​သွား​ပြီ​လို့ ​မှတ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​စိတ်​မ​ပူ​ပါ​နဲ့. rounter ​ကို Default reset ​ချ​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​ညီ​လေး​ရဲ့ rounter ​ရဲ့​နောက်​နား​မှာ ​သွား​ကြား​ထိုး​တံ​လောက်​ရှိ​တဲ့ ​အ​ပေါက်​လေး ​ပါ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​များ​သော​အား​ဖြင့်​တော့ ​အ​ပေါက်​အောက်​မှာ DEF ​လို့​ရေး​ထား​တတ်​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် rounter ​အ​မျိုး​အ​စား​နဲ့ ​ရေး​သား​တဲ့​စာ​သား​ချင်း ​မ​တူ​ညီ​နိုင်​ပေ​မယ့် ​အ​ပေါက်​က​တော့ ​အ​တူ​တူ​ပါ​ပဲ. ​အဲ့​ဒီ့ ​အ​ပေါက်​ထဲ​ကို ​အ​ပေါက်​နဲ့​ဆံ့​တဲ့ ​တုတ်​တံ​တစ်​ချောင်း​ကို 1 ​မိ​နစ်​လောက် ​မ​လွတ်​ဘဲ​နဲ့ ​ထိုး​ထား​လိုက်​ပါ. ​တစ်​မိ​နစ် ​ပြည့်​သွား​တာ​နဲ့ ​ပြန်​လွှတ်​လိုက်​ပါ. ​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် ​ညီ​လေး​ရဲ့ rounter ​ကို ​ပြောင်း​ထား​တဲ့ rounter ip, username, password ​အား​လုံး​က ​မူ​ရင်း​အ​တိုင်း​ဖြစ်​သွား​ပါ​ပြီ . ​မူ​ရင်း​အ​တိုင်း​ဆို​တာ​က ​အ​ပေါ်​မှာ ​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း​ပါ. ​အ​ပေါ်​က ​ပေး​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း ​ပြန်​ဝင်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်.
​ကဲ​ကျန်​တာ​က​တော့ ​ကိုယ့်​ဟာ​ကို ​ပေး​ချက်​တဲ့ Default IP:, ​ပေး​ချင်​တဲ့ Default Username ​နဲ့ ​ပေး​ချင်​တဲ့ Default Password ​ကို​သာ​ပေး​လိုက်​ပါ . ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကို​လွှင့်​လိုက်​တဲ့ wifi password ​ကို ​ကို​ပေး​ချင်​တဲ့ password ​ကို​ပေး​ပြီး save ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​အစ်​ကို့​မှာ ​ညီ​လေး​အ​မျိုး​အ​စား rounter ​မ​ရှိ​တဲ့​အ​တွက် ​အ​သေး​စိတ် ​မ​ရေး​ပေး​နိုင်​တဲ့​အ​တွက် ​စိတ်​မ​ကောင်း​ပါ​ဘူး. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ချိန်​ရ​တယ်. ​ယုံ​ကြည်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ညီ့​ရဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ​ကို ​ခ​ဏ​ဝင်​ပြီး​တော့ ​ကြည့်​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အစ်​ကို့​ရဲ့ ​ဆိုက်​မှာ ​တင်​ဖို့​အ​တွက် screen short ​တော့ ​ရိုက်​ယူ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. screen short ​ရိုက်​မယ်​ဆို​တာ​က ​ညီ​ရဲ့ ​အ​မှန် password ​နဲ့ ​အ​မှန် username ​ကို ​မ​ရိုက်​ပါ​ဘူး. photoshop ​နဲ့​ပြောင်း​ထား​ပေး​မှာ​ပါ. ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ဝင်​ပြီး​တော့ ​စမ်း​စေ​ချင်​ပါ​တယ်. ​အ​ရာ​ရာ​တိုင်း​ဟာ ​စူး​စမ်း​ချင်​တဲ့​စိတ်​ရှိ​မှ ​အ​တတ်​မြန်​တာ​ပါ. ​စမ်း​သာ​စမ်း​ပါ. rounter ​မ​ပျက်​စေ​ရ​ဘူး​လို့ ​အစ်​ကို ​အာ​မ​ခံ​ပါ​တယ်.
Kglay February 9, 2012 at 8:48 PM
​ဟာ ​ဗျာ .. ​တ​ကယ်​ဗ​ဟု​သု​တ​ရ​ပါ​တယ် ။
်ူLeoYeAung February 10, 2012 at 4:43 PM
​ကျေး​ဇူး​ပါ ​ကို​ညီ​ရေ။ ​ကျွန်​တော်​လဲ​ပ​ညာ​တစ်​ခု ​ရ​ပြန်​ပြီ။ ​ခင်​တဲ့ ​ရဲ​အောင်။
maung zaw zaw February 23, 2012 at 6:59 PM
luckylymm March 5, 2012 at 11:11 PM
​ကျေး​ဇူး​ဘဲ​အ​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော်​လည်း (true) ​လိုင်း​နဲ.​သူ​များ​ကို​ပြန်​ပြီး​တော့wifi ​နဲ.​ပေး​သုံး​ထား​တယ်​ကျ​တော်​က​အ​ပြင်​ကို ​ပြန်​ပြီး​လွှင့်​ပါ​တယ်။ ​ကျ​တော်​မ​သိ​တဲip ​တွေ ​ဝင်​လာ​ပါ​တယ် ​ကျ​တော်​က​တော့ ​ပိတ်​ထား​ချင်​ပါ​တယ်။​ဘယ်​လို​ပိတ်​ရင်​ရ​ပါ​လဲ။
password​တ​ခု​ဘဲ ​တောင်း​နေ​ပါ​တယ်။ ​ဆော​ဝဲ​လေး​ရှိ​ရင်​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး။ router ​ထဲ​မှာ ​ဘယ်​လို​ပိတ်​ရ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို​လဲ ​ပြော​ပေး​ပါ​နော်။
​သက် March 23, 2012 at 5:11 PM
YeMyatLin April 19, 2012 at 3:26 PM
​ရိုး​ရာ May 4, 2012 at 10:45 AM
​အ​ကျး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် . . ​အစ်​ကို​လို ​စေ​တ​နာ​ကောင်း​တဲ့​သူ​က ​အ​မြဲ​ကံ​ကောင်း​နေ​မှာ​ပါ ..
Tin Aung Win June 17, 2012 at 7:39 PM
​ဟုတ် ​အ​ကို​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​အ​ကိုယ့်​ရဲ့ ​ဖော်​ပြ​ထား​တာ​တွေ​ကို ​ကျွှန်​လေ့​လာ​ရ​တာ ​ပျော်​ပါ​တယ် ​အ​ကုန်​လုံး​တော့​နား​မ​လည်​ပါ​ဘူး ​အ​ကို​ကျွှန်​တော်​က ​အ​ခု​မှ ​စ​သုံ​တာ​မို့​ပါ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​အ​ကို
Tin Aung Win June 17, 2012 at 7:41 PM
Tin Aung Win June 17, 2012 at 7:44 PM
​အ​ကိုယ့်​ရဲ့ ​ပ​ညာ​မ​မွေ​တွေ​ကို​လေ့​လာ​ခွင့်​ရ​လို့ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​အ​ကို
alinkar chitthu July 8, 2012 at 1:19 PM
alinkar chitthu July 8, 2012 at 1:21 PM
black July 23, 2012 at 1:26 PM
​ဆ​ရာ​လုပ်​တယ်​လို့ ​မ​ထင်​ပါ​နဲ့​ခင်​ဗျာ..​အ​ပေါ်​က​ရေး​ထား​တာ​ကို ​ဖတ်​မိ​ပြီး​သ​တိ​ထား​မိ​လို့​ပါ... ​နေ​ရာ​ပေါင်း​စုံ​က router ​တွေ​ရဲ့ default gateway IP ​က ​မ​တူ​တဲ့​အ​တွက် ​တစ်​ချို့ router ​တွေ​အ​တွက် mozilla address bar ​မှာ 192.168.1.1 ​ရိုက်​ထည့်​လဲ default Gateway IP ​မ​မှန်​တဲ့​အ​တွက် setting page ​က​ကျ​လာ​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး.. ​အ​သေ​ချာ​ဆုံး​နည်း​လမ်း​က window+R ​ကို​တွဲ​နှိပ်​ပါ run box ​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် run box ​ထဲ​မှာ cmd ​လို့​ရိုက်​ထည့်​ပြီး enter ​နှိပ်​လိုက်​ပါ command promp ​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်.... command promp ​ထဲ​မှာ ipconfig /all ​လို့​ရိုက်​ပြီး enter ​နှိပ်​လိုက်​ရင် ​ကိုယ့်​ရဲ့ IP address ​တွေ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်.. ​အဲ​ဒီ​ထဲ​က​မှ Default Gateway ​ဆို​တဲ့ IP address ​က​မှ ​အ​မှန်​ဖြစ်​ပါ​တယ်... ​အဲ​ဒီ Default Gateway IP address ​ကို mozilla address bar ​မှာ​ရိုက်​မှ setting page ​ကျ​လာ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်... ​အ​မှား​ပါ​ရင်​ခွင့်​လွတ်​ပါ​ခင်​ဗျာ...
khineminsoe(vietnam) July 24, 2012 at 10:04 PM
​အင်​တာ​နက် ​ဝယ်​ယင် ​လွယ်​ပေ​မဲ့ ​ဈေး​ကြီး​တယ်။
​အိမ်​နဲ့ ​ခပ်​လှမ်း​လှမ်း ​ပေ၅​ဝ ​လောက်​မှာ ​သုံး​ချင်​တယ်။( ​မြေ​ညီ​ထပ်​မှ ​တိုင်း​လျှင်)
​အိမ်​က (၇)​လွှာ​မှာ။ ​အိမ်​မှာ​က ​ည​ဘက်​ကျ​ယင် ​စ​ကား​ပြော​တာ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​လို့​ပါ။
​ဘာ​လို ​လုပ်​နိုင်​လဲ ​ခင်​ဗျာ။
​ဆော့​ဝဲ ​သို့ ​ပ​စ္စည်း ၊၊
​ကြီး​မား​တဲ့ ​ပ​စ္စည်း ​သို့ ​ဈေး​မြင့်​တဲ့ ​ဆော့​ဝဲ ​ကို ​မ​သုံး​ချင်​ပါ။​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်။
​နောက်​ပြီး ​ပေး​ပဲ paypal ​အ​ကြောင်း​သိ​ချင်​ပါ​တယ်။
Hello Ko Nyi Nay Min.
I am one of your members.
The problem is >>>>>>>>>>>
I live in Singapore. At home, I can use internet wireless network connection.The House Owner provides wifi.
but far from home, I want to use internet with this line.
my floor is7floor and I want to use the place 50ft from ground floor.
I prefer software than materials.
aung min thu September 16, 2012 at 6:46 PM
​အ​ရမ်း​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် .....​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ဒီ​ထက်​မ​က ​အောင်​မြင်​စွာ​ဖြတ်​သန်း​နိုင်​ပါ​စေ...
pyae November 12, 2012 at 6:49 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း japan ​က​သွင်း​တဲ့ honda car ​တွေ​မှာ​ပါ​တဲ့ dvd ​စက်​တွေ​က​ဂျ​ပန်​စာ​တွေ​ကို english ​လို​ပြောင်း​တဲ့ software ​ရှိ​တယ်​ဆို​လို့ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုန်း (honda internavi 9NH6) player ​ပါ gps ​ပါ ​ပါ​တယ်
aung myotun April 25, 2014 at 7:22 PM
Htwe Htweaung December 1, 2012 at 10:53 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ ​အ​ကူ​အ​ညီ​တ​ခု​တောင်း​ချင်​တယ် ​ကျွန်​တော်​က ​မ​န္တ​လေး​ဗြ​ဟ္မ​စိုရ်​လူ​မှု​ကူ​ညီ​ရေး​အ​သင်း​ရုံး​က ​ကွန်​ပျူ​တာ​ဌာ​န​က ​ဝန်​ထမ်း​ထမ်း​ပါ​အစ်​ကို ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​သင်း​ရုံး​က website ​ကို hacket ​လုပ်​ခံ​ထား​ရ​တယ် ​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို​ပြန်​လုပ်​လို့​ရ​လဲ​အစ်​ကို ​ပြန်​လုပ်​လို့​ရ​တယ်​ဆို​ရင် ​အ​ကူ​အ​ညီ​ပေး​ပေး​ပါ​အုံး​အစ်​ကို ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​နော်
zaw December 25, 2012 at 8:59 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျား​မဂ်​လာ​ပါ ​ကျွန်​တော်​တို့​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ညင်း​ခုံ​နေ​ကြ​တာ​တွေ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​ဖြေ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ် window7 and window8 ​ရဲ့​ကွာ​ခြား​ပုံ​နှင့် ​အ​သုံး​ပြု​ပုံ ​နှင့်
​ဘယ်window​က​အ​ရင်​ထွက်​လာ​ပါ​သ​လဲ ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျား ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​ဖြေ​ကြား​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ် ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်
sound January 6, 2013 at 3:22 PM
​အစ်​ကို​ရေ ​ညီ​လေး​အ​ကောင်.​ဖြစ်​တဲ sound325@gmail.com ​အ​ကောင်.​က
deleted ​လုပ်​ခံ​ရ​ပါ​တယ် ​ဘယ်​သူ​လုပ်​မှန်း​တော​မ​သိ​ပါ​ဝူး ​အဲ​ဒါ​လေး​ပြန်​ယူ​ပေး​ပါ​လား​ဗျာ
​ရ​ရင် ​အစ်​ကို​ရာ soundkalay@gmail.com ​သို.​ပေး​ပို​ပေး​ပါ​ဗျာ ​မိတ်​ဆွေ​တွေ​များ​လို​ပါ
sound January 6, 2013 at 3:28 PM
sound January 6, 2013 at 3:29 PM
sss March 25, 2013 at 9:52 AM
i like this one..!!!! this page i want to print very luck today... thanks brother Ctrl and p ..good
min hnin August 4, 2013 at 1:25 PM
​အ​ကို​ရေ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး ​ကျ​နော် ​စက်​က wifi ​ချိပ်​လို​ရ​ပြီး​တော no internet​အ​ပြ​နေ​လို ​အဲ​ဒါ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​မ​သိ​လို ​အ​ကို ​သိ​ရင်​ပြော​ပြ​ပါ​နော် ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​အ​ကို ​ညီ​နေ​မင်း
Ye Linn Zaw October 22, 2013 at 8:51 PM
​ကျွန်​တော့်​ရုံး​မှာ belkin F7d2301 ​အ​မျိုး​အ​စား router ​ကို​သုံး​ထား​ပါ​တယ်...​လိုင်း​က​တော့ yatanarpon ​က Wimax ​ပါ...​ခက်​တာ​က ​ကျွန်​တော်​မ​ရောက်​ခင်​က router ​ကို ​အ​ပြင်​က service ​သ​မား​တွေ configure ​ထိုင်​ပေး​သွား​တာ login password ​ထည့်​သွား​တယ်...​သူ​တို့​လုပ်​သွား​ပေး​တဲ့ ​အ​ခြေ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​ခု​လက်​ရှိ​လို​အပ်​တဲ့​အ​ခြေ​အ​နေ​က ​မ​တူ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ်....​အ​ကို့ share ​ပေး​ထား​တဲ့ networking ​စာ​အုပ်​တွေ​ဖတ်​ပြီး ​ဘာ​လုပ်​သင့်​လာ​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​နည်း​နည်း ​သ​ဘော​ပေါက်​လာ​ပေ​မယ့်...password ​က ​မ​သိ.....​မေး​တော့​လည်း ​ကြက်​ပျောက်​ငှက်​ပျောက် ​ဘယ်​ရောက်​ကုန်​ကျ​မှန်း​မ​သိ​တော့.....password ​ကို​ဘယ်​လို​ပြန်​ယူ​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ​လေး​သိ​ချင်​ပါ​တယ်​အ​ကို....​အ​စိုး​ရိမ်​ဆုံး reply ​က​တော့ "​ညီ​လေး router ​ကို reset ​ချ​လိုက်​ပါ" ​ဆို​တာ​ပါ​ပဲ​အ​ကို​ရေ.....​ကျွန်​တော်​လည်း​မ​ကျွမ်း​ကျင်​တော့ ​အ​စမ်း​လုပ်​ရင်း ​လုပ်​ငန်း​လည်​ပတ်​မှု​ရပ် ​သွား​မှာ​စိုး​လို့​ပါ​အ​ကို.....
Ye Linn Zaw
Ko Thu February 13, 2014 at 4:29 PM
Adobe Illustrator ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် version cc 2018 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... 32bit အတွက်ကော 64bit အတွက်ကော နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကို ...
gtalk ​တွင် zaw gyi font ​မ​ပေါ်​ခြင်း ​ပြ​ဿ​နာ​အ​...